China Cyclone Strongman sandbag ifektri kanye nabaphakeli | Feiqing
ISiphepho iStrongman Sandbags senziwe ngeyayiloni engu-1050D Cordura 100%, i-YKK ZIPPER njengokuhluka kwethu kokuma kwesakhiwo seStrongman Sandbag futhi sisebenzise isitayela esifanayo sokugcwalisa ifanele. Umehluko osemqoka umklamo oyingqayizivele we-tapered lapho phezulu kwezikhwama kubanzi ububanzi kunaphansi.
Sinikezela ngeSiphepho iStrongman Bags ngosayizi BABILI *, ngamakhono amakhulu esisindo: 100LB, 150LB. Isikhwama ngasinye sakhiwe ngemigqa ethungwa kathathu nokufakwa uphawu kophawu olungokwezifiso eqhweni eliphezulu ukuvikela uziphu. Izikhwama zokugcwalisa ezakhelwe ngaphakathi zifaka phakathi ukuvalwa kwe-zipper kanye ne-hook-and-loop-ukuqinisekisa ukuthi konke okokugcwalisa kuhlala kugcwele ngokugcwele njengoba usebenza ohlelweni lwakho.
Ngoba izikhwama zesanti zekhwalithi zingathululwa bese ziphinde zigcwaliswe kwenye indawo yokuzivocavoca, inkundla, ipaki, njll., Zisebenza njengamathuluzi wokuqeqesha eStrongman aphathekayo futhi enziwa ngezifiso kubadlali banoma iliphi ibanga lesipiliyoni — enye indlela elula yokuhambisa amabhola ama-slam asindayo namatshe.
Ngicela uqaphele: Isisindo esilayishwayo seSiphepho iStrongman Bag sincike ebuningini nasayizi wezindaba ezisetshenziswayo. Imidiya ethile ingadala ukuthi isisindo sonke sesikhwama sibe sikhulu noma singaphansi komthamo wesisindo obekiwe Ngenxa yemvelo yendwangu nokusetshenziswa okuqondisiwe, izikhwama ezinamandla zinganweba ngokuhamba kwesikhathi ngokusetshenziswa. Ngokwengeziwe, lezi zikhwama azigcwaliswanga.
1.Cyclone / Tapered isitayela izikhwama, ezinkudlwana phezulu nezincane ezansi
2.1050D Cordura 100% inayiloni, ykk uziphu
3.Filler Umthamo (4 Osayizi): 100LB, 150LB,
Isikhwama Se-Filler Esakhelwe ngaphakathi
5.Zipper futhi Hook-and-Loop Ukuvalwa
I-6.Filler Material Ayifakiwe.
7.Umbala: omnyama, obomvu, ohlaza okwebutho, onsundu
Langaphambilini Isikhwama sesibungu sigcwalisa isihlabathi
Olandelayo: Okuphakelayo Sack
Isikhwama sokuphonsa uStrongman